NRNA सोचेको के थियो, भयो के ? - Samudrapari.com
NRNA सोचेको के थियो, भयो के ?
२९३० पटक हेरिएको
गलकोट समाज जापान
NRNAका बारेमा विभिन्न व्यक्तिले फरक फरक धारणा राखेको पाइन्छ । हुन त NRNA आफैमा नराम्रो संस्था त होइन । तर पनि सुरुवाती देखि नै यो सस्था आफैमा विवादरहित बन्न सकेन । नेत्तृत्व तहमा नेतृत्व गर्ने हरुबिचको एक प्रकारको विवाद रहदै गर्दा तल्लो स्थरमा यो सस्था धनिहरुको सस्था हो, साहुहरुको सस्थाहो भन्ने प्रकारको भावना पैदा पनि नभएको होइन जुन अहिले सम्म छ ।
निर्णय गर्ने बेला आफु अनुकुल गर्ने र नेतृत्वमा आउने जुन सुकै उपाय पनि अपनाउने विषयले NRNAलाइ अझ तरंगित तथा अर्को दृष्ट्रिकोण बाट हेर्ने गरिन्छ । जति बेला भिम उदास र राम प्रताप थापाहरुले यस संबन्धित भिजन ल्याए र यसलाई सफल पार्न कमाण्डरको रुपमा उपेन्द्र महतोलाइ अगाडी सारे । उपेन्द्र महतोको डाइनमिक व्यक्तित्व कारणले पनी ठुलो रोल खेल्यो जहा नेपाली त्यहा NRNA स्थापना भयो । यो कालखण्डमा संगठनको विस्तार द्रुत गतीमा भयो र संगठनकर्ताले यसको आकारलाइ ठुलो सम्झे। संगठन भित्र मनी र मसल वलाको दबदबा रहन गयो , भिजनरी लिडरहरुको चरम अभाब भयो ।
जसले NRNA को बारेमा कल्पना गरेका थिए ति व्यक्तित्वहरुलाइ बिच बाटोबाटै खेदियो । NRNAको मुख्य उदेश्य अहिले छाया मात्र होइन हराएको छ । अहिले NRNAको चुनावमा गैर आवासीय नेपालीको हक हित का कुराहरु हराएका छन् । ठिक त्यसको विपरित अहिले बढेको छ शक्तिकेन्द्र धाउने, कुन पार्टीसंग नजिक हुने, कुन पार्टीका नेतालाइ अर्थले आफु पोल्टा पार्ने त्यो व्यापक नै बढेको छ जुन लुकाएर लुक्दैन ।
अहिले पछिल्लो चरणमा जादा अहिले त अधिवेसन को संघारमा आइपुग्दा ठुला राजनैतिक पार्टी मुख्यालय धाउने मात्र होइन आफ्नो पदको प्यास मेटाउनको लागी पार्टी प्रवेश नै गर्ने अर्को तिर चरम जातीयता का कुरा उछाल्ने जातीय संगठनहरु सलबलाउने । अर्को तिर पैसावालाले कब्जा गर्न खोज्ने सारमा भन्ने हो भने जातीयता , पैसावला र राजनैतिक हरुको क्रिडास्थल बन्यो अथवा यिनै तिन खराब प्रवृतिको त्रिवेणी बन्यो NRNA हिजो जुन पवित्र विचारले स्थापना गरिएको भए पनि यो संस्था आज हुदै भोलीसम्म पुग्दा पुरै स्खलित हुने छ । त्यसको लागी संरक्षक परिषदले आफ्नो शक्तिको मेहनत गर्नैपर्छ ।